စာရေးသူ မယ့်ကိုး at 12/12/2010 09:00:00 PM
ညီမရဲ့ အိမ် ပိုစ့်တွေဖတ်ရင်း
အိမ် ဆိုတဲ့ စကားကို ခဏ ခဏ ရေရွတ်နေမိတယ်.... ပြီးတော့ တွေးတယ်...
ကြိုသူမဲ့ ရက်စက်တဲ့မြေပေါ်မှာ တည်ထားပေမဲ့ ကျွန်မအိမ်ပြန်ချင်ပါတယ်.. အိမ်မဲ့သူတေးမှာကတည်းက အဲဒီစာသားလေးကို သိပ်ခံစားရပါတယ်
နွေးထွေးစွာကြိုဆိုနေတဲ့.. အမေအိမ်ကိုပြန်ခွင့်ရပါစေလို့ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ် မယ်ကိုးရေ..
စကားမစပ်. ပြီးသွားပြီလား ? ဖတ်လို့တောင်မ၀သေးဘူးရယ်.ထပ်ရေးလို့ရရင်ရေးပါအုန်း..
ဒီစာလေးအတွက်တော့ မယ့်ကို ကျေးဇူးအထူး..
အိမ်ပျောက်သူ တွေရဲ့ ခံစားချက်ကို
စာနာ နားလည် ပေးနိုင်ပါတယ်..
12/12/10 9:49 PM
အဲဒီကတည်းက အိမ်နဲ့ဝေးတာ ခုချိန်ထိ ဝေးနေတုန်း
ဘယ်တော့မှ အိမ်ကို အိမ်ရှင်အဖြစ်ပြန်ရမယ်မသိ..
မကြာခဏ ပြန်ပေမဲ့ ဧည့်သည်အဖြစ်နဲ့သာ..
အိမ်ပျောက်နေသူများ အိမ်ကိုအမြန်ဆုံး ရှာဖွေတွေ့ရှိပါစေ
13/12/10 12:31 AM
ယခုလက်ရှိခံစားနေရတဲ့ ခံစားချက်တွေနဲ့ တထပ်တည်းကျနေတာမို့ စာနာနားလည်မိပါတယ်။ တခြားတဖက်ကပြောရရင် ကိုယ်လို လူတွေရှိသေးပါလားဆိုတဲ့ အသိလေးတချက်ဝင်သွားတယ်။ အိမ်ဆောင်းပါးများအတွက်ကျေးဇူး..... ဆက်လက်အားပေးနေပါဦးမယ်။။
13/12/10 1:09 AM
အိမ်ပျောက်သူမဖြစ်ချင်ဘူး။ မဖြစ်ချင်ပဲ ဖြစ်ရသူတွေအတွက် တကယ်စိတ်မကောင်းဘူး..
ကံကောင်းစွာ အိမ်ပျောက်သူမဖြစ်ခဲ့တဲ့အတွက် ကံတရားကို ကျေးဇူးတကယ်တင်မိတယ်။
13/12/10 9:57 PM
အိမ်ကိုလွမ်းတယ် မယ်ရယ် ... လွမ်းတယ် ...
14/12/10 6:24 AM
သေသေချာချာပြန်စဉ်းစားကြည့်မိတော့ ကိုယ်ကိုယ်တိုင်လဲ အိမ်ပျောက်နေတဲ့ ခရီးသွားတစ်ယောက်ပါလားလို့ .....
ထပ်တူခံစားရတယ် မမကိုး ...
လွတ်လပ်မှုတွေ ထပ်ပျောက်သွားမှာ စိုးလို့ အိမ်ကနေထွက်ပြေးလာခဲ့ပြီးမှ မလွတ်လပ်မှုတွေထဲက ကိုယ့်အိမ်လေးမှာပဲ မိသားစုနဲ့ အေးအတူတူ ပူအမျှ ပဲပြန်နေခွင့်ရချင်နေမိပါတယ် အနည်းဆုံး ကိုယ့်ဇာတိမြို့လေးမှာ ငယ်သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ ဆရာဆရာမဟောင်းတွေနဲ့ ဦးလေးဒေါ်လေး သက်ကြီးရွယ်အိုတွေနဲ့ မရှိအတူ ရှိအတူ ကိုယ်ကာယနဲ့ဖြစ်ဖြစ် နွေးနွေးထွေထွေး ပြုစုစောင့်ရှောက်ခွင့်တော့ ရသေးရဲ့လို့လဲ တွေးမိနေတယ်.မမယ်ကိုးရေ..တနေ့တော့ပြန်နိုင်မှာလို့ပဲ အားတင်းရသဗျာ..
26/12/10 4:43 AM
ကျနော်ကတော့ နှစ်ပေါင်း အစိတ်လောက် ရွက်ကျ ပင်ပေါက်လို နေခဲ့ရပြီးတဲ့နောက် sugar-coated humans & stuff တွေ မပေါများတဲ့ အရပ်တိုင်းကို ကိုယ့်အိမ်လို့ သဘောထားတတ် / ချစ်တတ်ခဲ့ပြီ။ fairness လောက်မှ ကိုယ်တိုင်လက်တွေ့ မကျင့်သုံးနိုင်ဘဲနဲ့ တရားစကားများများ ပြောချင်တဲ့ ပဲများများ တရားစခန်းဝင်သူ တယောက်ထက်စာရင် လိမ်ပြောကျင့် မရှိတဲ့ ဘာသာမဲ့ဝါဒီ တယောက်ကိုမှ ကိုယ့်ဆွေမျိုး အရင်းအချာလို ပိုခင်တတ်ခဲ့ပြီဗျး))
2/7/11 3:56 AM
မယ့်ရေ အိမ်စွန့်ကာ အိမ်အသစ်တည်ဖို့ ရည်ရွယ်ချက်မရှိဘူးဆိုလို့ ၀မ်းသာလိုက်တာ။ မယ့်ရေ တစ်နေ့နေ့တော့ အိမ်ကို အပြီးပြန်လာမယ်မလား။ မေ့မနေနဲ့ဦးနော် ကျနော့်ကို မုန့်ဝယ်ကျွေးမယ်ပြောထားတာ အကြွေးမှတ်ထားတယ်နော်။